Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ် | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
နေအိမ် → Aprilia → Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ်
19 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Aprilia NA 850 Mana နှင့်ဟွန်ဒါ NC 700 S က DCT မော်တော်ဆိုင်ကယ်
အဘယ်ကြောင့် clutch ဖြစ်ကြောင်းနှင့်နည်းပညာလုပျနိုငျပါလျှင်အကူးအပြောင်း? အလိုအလျောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပိုပြီးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လာကြပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့အသုံးဝင်သောဘာတွေလုပ်နေလဲ, အဘယ်သူကိုဖြစ်ကောင်းမှန်ကန်စွာတစ်ဦးအတွက်စိတ်ပျက်ဖွယ်? နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြောင်းအလဲတွေဟာနှင့် Dual-clutch ဂီယာ.
အပူဆွေးနွေးမှုများမှ Stammtisch ဒီအာမင်လိုက်ပါတယ်, မရှိတော့နှစ်ပေါင်း, နှင့်လွတ်လပ်သို့မဟုတ်ဆိုဖှယျ gearshift တစ်ကန့်သတ်ခဲမည်သူမဆိုညည်းတွား. အဲဒီအစားဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်. ကို manual ဂီယာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခေတ်မီအော်တိုတစ်ဦးနှစ်သိမ့်အတွက်အမြတ်နှင့်လွယ်ကူခြင်းကတိပေးထားတယ်, နှင့်ဒိုင်းနမစ်မှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုတိုးလာ.
အစဉ်အဆက်တစ် dual-clutch ဂီယာနဲ့ကားကိုမောင်းနှင်ခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့တပ်မက်ဒီအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်.
ဆိုငျကယျသမားနှင့်အတူအလိုအလျောက်ဆိုင်ကယ်, သို့သော်လှောင်ပြောင်, အကောင်းဆုံး, တစ်ခုလုံးကို "အသက်အတွေးအခေါ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်" ၏တစ်ဦးန့်အသတ်များကသံသယတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်သူတို့အားသံသယဝါဒီအစဉ်အဆက်အစဉ်အဆက်ထိုကဲ့သို့သောစက်ဘီးကြောင့်အလုပ် သွား. ဘယ်လောက်အံ့သြစရာမြင်ကြလျှင်? ဟွန်ဒါအနေနဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်တပ်ဆင်ထားတဲ့ VFR အပေါ်အနည်းဆုံးယုံကြည်နေ 1200 လည်း Crosstourer နိမ့်-ဘတ်ဂျက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်.
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား 700 S နှင့် X ကို, တစ်ဦးအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှထွက် 1000 အလိုအလျောက် Dual-clutch ဂီယာနှင့်အတူယူရို (DCT).
သင်ဟွန်ဒါ Integra Scooter ကိုကြည့်တဲ့အခါမှသာအရပျသို့ကို double-clutch ထုတ်လုပ်မယ့်ငွေသောက်သောက်နဲ့သာကိုင်သာရှိတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်ပေါင်းစပ်မှာဒီသံသယရှိ .
ဒါဟာတူညီတဲ့အင်ဂျင်အပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ဘောင်-based နှင့်, ယှဉ်ပြိုင်ဖို့မတူဘဲဖွင့်မယ့်ဂန္ Dual-clutch ဂီယာဂီယာနှင့်အတူ.
အဆိုပါ NC 700 S က DCT သူတို့၏ဆိုင်ကယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးမပြပြင်ပမှကံကောင်းထောက်မစွာနိုင်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ Scooter နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များအကြားကဒီအသစ်နှင့်ဆန်းသစ်စပ်မဟာဗျူဟာမဟုတ်ပါဘူး. မှစ. 2007, အဆိုပါ Aprilia Mana ဟာစတင်လုပ်ကွက်၌တည်ရှိ၏.
နှင့်သင်၏ 90 ဒီဂရီ V2 အင်ဂျင်ကို 839 ကုဗစင်တီမီတာပု Gilera မိသားစုဆရာဝန်ကနေ 800 Scooter နဲ့နည်းပညာပိုင်းနီးပါးမပြောင်းလဲဝယ်ယူခဲ့သည်.
အဆိုပါဂီယာအချိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တဲ့ခါးပတ် drive ကိုကပြောင်းလဲနေသည်. ရိုးရှင်းစွာအဓာတ်ငွေ့မြှင့်ခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ချောချောမွေ့မွေ့ငုပ်. သို့သော်တဦးတည်းမဖြစ်မနေ, however, ဝယ်ယူမှုအတွက် roller ပုံမှန်ရော်ဘာတီးဝိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုယူ.
ယခုမူကားမှားအတွက်မျက်စိနှင့်နားကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ high-revving 50-cc Scooter သူ, ကြီးမားသော.
Mana ၏ခြုံငုံ concept ကိုအသေးစိတ်မှတဆင့်ထင်နှင့်
သဟဇာတ. အဆိုပါဘူးသီးအပေါ်တစ်ဦးကဖိအား, အနည်းဆုံးနှင့်အတူ Aprilia V2 76 ခိုင်ခံ့သွားကောင်ရေလက်ကိုင်ပါဝါပူဖောင်း.
ဒီ soundscape ခုနှစ်တွင်အဘယ်သူမျှမနေတဲ့ Scooter ထင်. အမြင်အာရုံ, အဆိုပါ Mana လုံးဝအီတလီ finesse နှင့်စိတ်ခံစားမှုအပေါ်စေသည်, ခြေဘရိတ်နင်းနှင့်ဂီယာလီဗာစားပြီးအကြံပေးချက်များအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောချိန်ညှိအဖြစ်ဒဏ်ငွေလက်ရာနှင့်အံ့သြဖွယ် features တွေ features တွေနှင့်အတူစုစည်းကြည့်ရှုအတွက်စည်းရုံးသိမ်းသွင်း.
ယေဘုယျအား, မြင့်မားသောအဆင့်မှာ Ergonomics, မသိမသာအားကစားဒူးထောင့်ကတော့အတော်လေးမြင့်မားသောတပ်ဆင်ထားလက်ကိုင်ဘို့အတော်လေးပိုင်ခွင့်မရပေမယ့်. ထိုကဲ့သို့သော Scooter မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပျော်စရာဟုတ်မဟုတ်? ဒီတော့သတ္တိဓာတ်ငွေ့တက်ကိုဖွင့်, အဆိုပါ centrifugal clutch နှင့်ပိတ်သိမ်းခိုင်းဖို့ကြိုးစားမှထွက်ခွာ.
Aprilia ရှေ့ဆက်လုံ့လရှိသူ Sprint. စဉ်ဆက်မပြတ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူ constant, ယင်းမော်တာအဆိုပါ Mana pithy နှင့် punchy accelerates. အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ, မြင့်အခြေစိုက်စခန်းမြန်နှုန်းအဆင့်အထိကြိုတင်မဲ၏မည်သည့်အချိန်တွင်မလုံလောက်သော torque ကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်, အရာဖြစ်ပါသည်, however, ခိုင်မာတဲ့တုန်ခါခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွား.
အားလုံးဆိုင်း၏စိတ်သက်သာရာ, တဦးတည်းစံလိုင်းနှင့်အတူလုံးဝကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်. ဘို့ 229 ကီလိုဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန်, အဆိုပါ Mana အငြိမ့်ဆွဲယူနေရာလေးကို tilt အတွက်ပစ်နိုင်ပါတယ်, ထိုအခါ, ထူးမြတ်သောအရောင်အ functioning Pirelli တာယာအားဖြင့်ကူညီခဲ့, တောအိနှင့်တည်ငြိမ်မိမိတို့၏ပတ်လမ်း.
အဆိုပါ Black ကသစ်တောမှတဆင့်သာနာရီဝက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ပြီးနောက်, တဦးတည်းကိုသင်ပြောင်းလဲမှု load မှမလွှဲမရှောင်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစစ်မှန်သောစစ်ဆင်ရေးမပါဘဲလုပျနိုငျဘယ်လောက် traditionalist ဆိုငျကယျသမားအဖြစ်အံ့ဘွယ်သောအမှု.
မဟုတ် Ultra-တိုက်ရိုက်ပေမယ့်, ဒါပေမယ့်ဓာတ်ငွေ့တွန်းအားအကောင်အထည်ဖော်အတွက်အတော်လေးစင်းကိုပညတ်တော်တို့ကိုသိသိသာသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကစားထားပြီး. သုံးအော်တို Modes သာ (Tour, မိုးရေ, အားကစား) ရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးအခြေခံမြန်နှုန်းအကွာအဝေးအတွင်းအဓိကအားဖြင့်ကွဲပြား. ဘယ်သူအချိုးကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်ရန်လိုလား, ဒီလူသိများဖို့ဟွန်ဒါကိုယ်တိုင် Toggle အား switch ကိုခြေနင်းနှင့်ဝသကဲ့သို့ (ဟွန်ဒါဖြည့်စွက်: 250 ယူရို) ပြုပါ.
Mana ခုနစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဂီယာအချိုးမရရှိနိုင်ဆင့်ကဲတဲ့အခါ. မူလတန်းစက်သီးတို့အကြားအကွာအဝေးကိုပြောင်းလဲဖို့ actuator. ဒီ feature, however, အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါ, အရှိန်မြှင့်လာသောအခါနှင့် V2 အင်ဂျင်နှင့်အတူကြင် coasting အခါအပြောင်းအလဲတွေဟာနှစ်ဦးစလုံးညီ.
တောင်မှအင်ဂျင်ဘရိတ် torque ပိတ်ထားသောအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာဒဏ်ငွေအသုံးဝင်သောဖြစ်ပါသည်. ယာဉ်မောင်းအပျြောအပါးရော်ဘာတီးဝိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအောက်မှာဒါကြုံတွေ့နေကြရသည်? လုံးဝမဟုတ်ဘူး.
အဆိုပါထောက်-Down လမ်းဆုံလမ်းခွများလွန်းတင်းကျပ်စွာညှိနေသည်, နှင့်နွေဦးပေါက်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်ပြန်တက်စျေးမှာအတွက်ချိန်ကိုက်, ဝေးလွန်းနိမ့်ဖိအားဇာတ်စင်. မကောင်းတဲ့ကတ္တရာတွင်စနစ်တကျ Mana ခါးဆစ်နှိုးဆော်မှစတင်ခဲ့သည်, အဆိုပါဆိုဖှယျဆက်လက်နှင့်တသားတလိုင်း verhagelt. ဒါကတော်တော်ရုပ်ဆိုးင်.
pillion ခရီးသည်နှင့်အတူခရီးစဉ်များအတွက်ကို ABS မဲဖြစ်ပါသည်သို့သော်ဘက်မှာအန္တရာယ်. ဒဏ်ငွေထိန်းချုပ်မှုကြားကာလနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ discs တွေကိုနှင့်နှောင့်နှေးအတွက် rabidly တစ်ခုတည်း mode ကိုအတွက် radial Brembo calipers အထုပ်, အဆိုပါ antilock ဘရိတ်စနစ်ကလုံးဝအန္တရာယ်ကင်း, ယာဉ်မောင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲဘရိတ်နီးပါးမလွှဲမရှောင်အခါတစ်ဦးစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့နှစ်ခု-လူကိုစစ်ဆင်ရေး. အဆိုပါ NC 700 S က DCT သိသိသာသာပိုကောင်းနိုင်.
တစ်ဦးကဟွန်ဒါကုန်သည်တစ်ဦးဒီဇယ်အင်ဂျင်အဖြစ်ရက်အနည်းငယ်အကြာက၎င်း၏အာဏာကိုဖြန့်ဝေရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ NC များ၏အင်ဂျင်ခေါ်ကခေါင်းပေါ်၌လက်သည်း hit. ယေဘုယျ၌ဤစက်ဘီးခဲရိုးရှင်းအတွက်စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်. upgrades ရွေ့လျားစတင်ရန်, ကောင်းသောခံစားရတယ်.
Ergonomics အရာအားလုံးအရပ်၌ရှိ, နှင့်လည်းအမြဲတမ်းဇာတ်စင်များအတွက်မှားယွင်းတဲ့အချည်းနှီးဖြစ်၏. အင်ဂျင်စတင်ပြီးနောက်, နက်နဲ, ဝေး-ရှေ့ဆက်-မြှောင်စင်ပြိုင်အမွှာသည်သူ၏ချက်ချင်းရည်မှန်းချက်ထုတ်ဖော်ပြသ: လက်တွေ့နှင့်ခွိုးခွံခြှတော.
ညာဘက်လက်ကိုင်အဆုံးတွင်သင်သည်နှစ်ခုမောင်းနှင်မှု Modes သာတဦးကိုရွေးချယ်ကြဘူး: သာမန်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်: D, နည်းနည်း sportier ရွေ့လျားများအတွက် S က.
ပထမဦးဆုံးဂီယာတစ်ဦးနှောင့်နှေးပြီးနောက်အလိုအလျှောက်ပါဝင်နေသည်. ယင်းအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာတစ်ခုသတိထားလှည့်ကွက်နဲ့, oops, ဝန်ရှေ့ဆက်အနေနဲ့အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခုန်စေသည်. အဆိုပါယာဉ်ကြောမှာ duel ကြားမှဤမျှဖြစ်ပါသည် 48 တကယ့်အပျြောအပါးမှအများဆုံးပါဝါ HP. တစ်ရပ်အနေဖြင့် Sprint အောင်မြင်ဖို့ဘယ်လောက်မြန်မြန်တော်တော်လေးအထင်ကြီး.
ဒါပေမယ့်မြို့အပြင်ဘက် NC သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်. သူမအိတ်များအတွက် Dummy အကြံပေးအဖွဲ့အတွက်အသုံးဝင်သောသိုလှောင်မှုအခန်းအဖြစ် Mana ရှိပါတယ်အဖြစ် (အဆိုပါ NC အတွက် Full-မျက်နှာထုပ် fit မ, အဆိုပါ Mana).
သူမလည်းကောင်းကောင်း Aprilia ထက်သိသိသာသာပိုကောင်း၏ကိုယ်ထည်ညှိနေသည်. အားကစား, ဒါပေမယ့်မရလည်းတင်းကျပ်အောင်ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်သမားရိုးကျချိတ်သက်သေပြ. အီတလီကျွမ်းကျင်အဖြစ် Bumpy ပုဒ်ရှင်းလင်းစွာ unexcited များမှာ, နှင့်ဟွန်ဒါ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဆွဲငင်အား၎င်း၏နိမ့်စင်တာမှကျေးဇူးတင်စကား, နှင့်ဆယ်ကီလိုအလေးချိန်၏ကြားမှအတွက် NC ၏စံမူကွဲမှ 700 S ကနေဆဲဧရာ.
ပင်နိမ့်တောင်စောင်းမှာကပစ်မှတ်ထားလိုင်းပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေဆဲ. တဖန်သင်တို့တစ်ကွေးအချို့မတိုင်မီ miscalculated သင့်လျှင်, disc ကိုညှိနှိုင်းကို ABS ၏အကူအညီဖြင့်ထပ်မံစနစ်တကျနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာတစ်ဦးရှေ့ကိုစတင်သည်.
လိုအပ်သောလက်စွဲစာအုပ်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်, however, အလွန်မြင့်မားသော Mana နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ.
ယခုတွင် dual-clutch ဂီယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်? ကောင်းစွာ, ဒါကြောင့်လည်းအလင်းနှင့်အရိပ်ထုတ်ဖော်ပြသ. စဉ်ဆက်မပြတ်ရထားအောက်မှာအလွန်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လျင်မြန်စွာမြင့်မားတဲ့အလိုအလျောက်ဆိုင်း.
အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအနေအထားပေါ် မူတည်. မြန်နှုန်း correspondingly အနိမ့်သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လာ.
တင်းကျပ်စွာအလှည့်နှင့်အတူ Curvy ပုဒ်တစ်ခုအလိုအလျောက်စင်ကြယ်သောကယ်ဆယ်ရေးစခန်း function ကိုသက်သာအမြတ်ချိတ်ဆက်နှင့်အတူသူအပေါငျးတို့ထံမှအနည်းငယ်သည်းခံခြင်းလိုအပ်.
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလိုအလျှောက်ကိုပိတ်ထား switches သောကြောင့်, အထူးသဖြင့် D-mode မှာ, ရုံပဲဂီယာကိုတက်စဉ်ဆက်မပြတ်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအနေအထားမှာကွေးမတိုင်မီ, ထို့နောက်ကွေးအထွတ်တိုက်ရိုက်နောက်တဖန်ဓာတ်ငွေ့ downshift လျှောက်ထားသည့်အခါ.
ဤသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်စတီယာရင်ပြင်ဆင်ချက်မှနှိုးဆော်ခြင်း. S က mode မှာ, အဆိုပါသင်တန်းများကိုအခြေခံအားဖြင့်ပေါ်လှည့်ကြောင့်အများအပြားကွေးပိုကောင်းပြု.
ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာမမျှော်လင့်ဘဲနူးညံ့သိမ်မွေ့ acceleration ကိုအပြည့်အဝအတိမ်းစောင်းနေစဉ်အတွင်းတဦးတည်းဂီယာပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဤနေရာတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, အရာကအနည်းဆုံးယားယံခြင်းများဖြစ်ပေါ်. အဆိုပါယာဉ်မောင်း, အရှင်သည်ဤအခြေအနေများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ် mode ကိုပြောင်းအပေါ်သို့ဟုခေါ်သည်. ဒေသခံသွင်းအားစုကဒီ exploit နိုင်ရန်အတွက်အကြံပြုသည်အထူးသဖြင့်မပြုမီရုံကျော်မှဆဋ္ဌမဂီယာကတည်းကအင်ဂျင်ဘရိတ် torque downshift 60 ကီလိုမီတာ / ဇဆောင်ရွက်နေဖြစ်နေဆဲ.
နောက်ဆုံးတွင်မြို့အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်နှောင့်အယှက်ဆက်သွယ်, သင်တန်းများကိုအကြားအများအားဖြင့်မလိုအပ်သော Toggle. ဤတွင် Aprilia သူတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပေါင်းလဒ်အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, စိုက်ပျိုးသက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေများက. မှတ်တွင်ပေမယ့်ဟွန်ဒါအဆိုပါအနိုင်ရဘို့အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နှင့်အနိမ့်လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကြောင့်စပါးရိတျ.
Aprilia SportCity တစ်ခုမှာ 50 & 125 မော်တော် Scooter လမ်းညွှန်
Aprilia RSV4 R ကို APRC လူမျိုးမက္ကင်းနစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်, ပစ္စည်းများ, အဝတ်, အစိတ်အပိုင်းများ
Aprilia Tuono V4 R ကို APRC အပေါ်လျင်မြန်စွာစီး – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ခရီးစဉ်သတင်းများ – မော်တော်ဆိုင်ကယ်…
BMW ကားကို C 650 GT ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – webBikeWorld
Aprilia RSV4 APRC: အားကြီးသောပြိုင်ဘက်
Aprilia Mana X ကို
Ducati Diavel Aprilia Mana 850 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati 60 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Ducati Desmosedici GP11 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Bajaj Discover ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Brammo Enertia ဆူဇူကီး Colleda CO ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး AN 650 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n